Luis Suarez oo soo saaray hadal uu ku sheegay sida uu daacad ugu yahay kooxda Barcelona – Gool FM
(Spain) 26 Maajo 2019. Weeraryahanka reer Uruguay ee Luis Suárez ayaa soo saaray war rasmi ah uu isku difaacayo, kaddib markii todobaadyadii lasoo dhaafay si kulul loogu eedeeyay inuu ka marmarsiyooday ciyaarista finalka Copa del Rey, si uu uga qeyb galo Copa America.
Kooxda kubadda cagta ee Valencia ayaa ku guuleystay xilli ciyaareedkan 2018-19, Copa Del Rey kaddib markii ay 2-1 ku garaaceen kulankii xalay ee Final-ka ahaa naadiga Barcelona.
Hadaba Luis Suárez ayaa war rasmi ah uu ku soo daabacay boggiisa rasmiga ah ee Twitter-ka wuxuu ku sheegay:
“Tan iyo markii aan ku biiray kooxda, waxaan cadeeyay sida aan daacad ugu ahay Barcelona, waxaan ku qasbanaa inaan maro qaliin, waana sababta aan uga maqnaa finalkii Copa del Rey”.
“Maalin murugo iyo niyadjab leh, maadaama aan awoodi waayay inaan caawiyo saaxiibadey kooxda, laakiin, haa, aad ayaan ugu faanayaa dhamaantood, waxay isku dayeen inay sameeyaan wax walba ee suurtogal ah si ay u siiyaan taageerayaasheena farxad”.
“Hada waa waqtigii la sameyn lahaa isbadal sababa la xiriira xilli ciyaareedka soo socda, si dadaal kastana loo bixiyo, isla markaana loo gaaro dhamaan ujeedooyinka”.
“Way adag tahay in markale aan ku guuldareysano koobka Champions League” - Jordan Henderson